October 1, 2019 - Myitter
မ​နေ့ညက တ​နေကုန်​ပင်​ပန်းထားတဲ့အရှိန်​နဲ့ ​ရေ​လေးချိုးပီး ကျုံး​ဘေးသွားထိုင်​ ဇာတ်​ကားကြည့်​​နေတုန်းအဲ့က​လေး​လေးက ​ဘေးက​နေလာထိုင်​ကြည့်​တယ်​ကိုယ့်​ထဲပါလာတဲ့ မုန့်​ထုပ်​​တွေ မျှ​ကျွေးရင်​ ​မေးခွန်းတချို့​မေးကြည့်​မိ​တော့……….. သူ​ပြောတာ​လေး​တွေက……….
October 1, 2019 Myitter 0
မ​နေ့ညက တ​နေကုန်​ပင်​ပန်းထားတဲ့အရှိန်​နဲ့ ​ရေ​လေးချိုးပီး ကျုံး​ဘေးသွားထိုင်​ ဇာတ်​ကားကြည့်​​နေတုန်းအဲ့က​လေး​လေးက ​ဘေးက​နေလာထိုင်​ကြည့်​တယ်​ကိုယ့်​ထဲပါလာတဲ့ မုန့်​ထုပ်​​တွေ မျှ​ကျွေးရင်​ ​မေးခွန်းတချို့​မေးကြည့်​မိ​တော့……….. သူ​ပြောတာ​လေး​တွေက………. သားအသက်​က ၁၅နှစ်​အ​ဖေအ​မေ အတူမ​နေ​တော့ဘူးအ​မေလည်း​နောက်​​ယောက်ျားနဲ့အ​ဖေလည်း​နောက်​မိန်းမနဲ့အ​မေ့ဆီ တခါတ​လေပြန်​တယ်​ ၃.၄ရက်​​လောက်​​နေပြီး ပြန်​ထွက်​လာလိုက်​တယ်​​ခြေဦးတည့်​ရာ သွားတယ်​ ကျုံး​ဘေးမှာ​နေတယ်​ဗိုက်​ဆာလို့ ပိုက်​ဆံလိုက်​​တောင်းတယ်​တချို့အတွဲ​တွေက အလုပ်​ရှာ​ပေးမယ်​ဆိုပြီး တကယ်​လည်းမဟုတ်​ဘူး ပြန်​​ပေါ်ကိုမလာ​တော့ဘူး သားလည်းလူ​တွေမမှတ်​မိဘူးလမ်းမှာ ​မေ့ကျန်​ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီရှိရင်​ […]
(၈)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုမှ ကျပ် ၅ သောင်းဆုထိ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် အစအဆုံး…
(၈)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုမှ ကျပ် ၅ သောင်းဆုထိ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် အစအဆုံး… (၈)ကြိမ် ထီပေါက်စဉ် သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု ဓ ၃၄၁၆၁၁ သိန်း(10000)ဆု ဎ ၁၁၁၄၁၈ 🤗သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ထ ၂၆၄၃၄၃ ဖ […]
နှလုံးသားလှတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲမေလေး ဖြစ်သွားပြန်တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှ
နိုင်ငံကြော် မင်းသမီျးေခာလေး ပတ်ထရစ်ရွာက ရွည်လြားတဲ့ အရပ်အေမာင်း၊ ဘိုဆန်တဲ့ မက်ြနွာအနေအထားနဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးအလား လွပသူလေးတစ်ဦးပါ။ ပတ်ထရစ်ရွာကို ယောကြာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကေလးပရိသတ်တွေကပါ အားပေးဝန်းရံကြပြီး ချစ်ခင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ထရစ်ရွာက လက်ရွိမွာလည်း ရုပ်ရွင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမွာ သရုပ်ဆောင်နေပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးနေလက်ြရွိပါတယ်။ ဒီနေ့မွာတော့ ပရိသတ်ကြီးချစ်တဲ့ မင်းသမီျးေခာလေး ပတ်ထရစ်ရွာကို […]
(၈)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်ပေါက်ဂဏန်းအားလုံး အခုpostအောက်မှာ တင်ပေးပါမည်အောင်ပါစေ…
(၈)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်ပေါက်ဂဏန်းအားလုံး အခုpostအောက်မှာ တင်ပေးပါမည်အောင်ပါစေ… သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုဓ ၃၄၁၆၁၁ သိန်း(10000)ဆု ဎ ၁၁၁၄၁၈ သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ထ ၂၆၄၃၄၃ ဖ ၂၈၈၇၅၀ သိန်း ၂၀၀၀ ဆု လ ၉၁၄၀၂၇ ထ ၄၂၉၂၆၆ […]
၈ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁သောင်းခွဲ ဆုကြီးထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီလမှာတော့ ကျန်းသန်းတစ်ထောင်ကိုတိုးမြှင့်ပေးထားတဲ့အတွက် ဝေေ၀ဆာဆာပဒေသာဆုမဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုကံထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ်တော့ထီဆုကြီးဖြစ်သည့်ကျပ်သိန်း၁၅၀၀၀ထွက်ရှိသွားတဲ့နံပါတ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။၈ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁သောင်းခွဲ ဆုကြီးထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီလမှာတော့ ကျန်းသန်းတစ်ထောင်ကိုတိုးမြှင့်ပေးထားတဲ့အတွက် ဝေေ၀ဆာဆာပဒေသာဆုမဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုကံထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိသော ၈ကြိမ်မြောက် ထီအထူးဆုကြီးမှာ ဓ ၃၄၁ ၆၁၁ ဖြစ်ပါသည်။ပေါက်ကျရဲ့လားဗျ။ကျန်တဲ့နံပါတ်တွေကိုထပ်မံတင်ပေးသွားပါဦးမည်။အားလုံးပဲကံထူးခြင်းတွေရရှိပါစေဗျ။ ၈ကွိမျမွောကျ သိနျး ၁သောငျးခှဲ ဆုကွီးထှကျရှိလို့လာပါပွီ။ဒီလမှာတော့ […]